Ukubukwa okumangalisayo - I-Airbnb
I-villa yamakamelo okulala emi-3 isendaweni ethule, neshaya kamnandi eCalliste eSt George enomoya othatha ukubukwa kolwandle, izintaba kanye nezingxenye ezithile zePherishi. Izingadi zangaphambili nangemuva zinotshani obugcinwe kahle nezitshalo ezinhle zasezindaweni ezishisayo. Yonke impahla ibiyelwe ngokuvikelekile futhi inesango. Ebusuku umgwaqo ukhanya kahle futhi kukhona namalambu enzwa onogada eduze kwendlu nasezingadini. Izindawo zokupaka ziyatholakala ngaphakathi kwezakhiwo zezimoto ezi-3 ezengeziwe
Izivakashi zikwazi ukungena egunjini lokuhlala eline-en-suite eliziqukathe ngokwalo nge-balcony yangasese. I-balcony inezindawo zokuhlala nezokudlela ezinokubukwa okumangazayo kwe-True Blue Marina eseduze, i-St Georges University nezinye izindawo ezizungezile.
Igumbi lokulala linombhede ophindwe kabili, ikhabethe elifakiwe elinendawo eyanele yokugcina kanye nesifuba samadrowa. Indlu yokugezela ineshawa, indlu yangasese, indishi yokuwasha kanye nendawo yokugcina izinto.
Umnyango nawo wonke amafasitela kufakwe izikrini zezinambuzane.
Ifeni uma idingeka iyatholakala ezivakashini ezingafisi ukusebenzisa isiphephetha-moya
Ibhulakufesi lamahhala lezwekazi linikezwa ekuseni yokuqala. Ibhodlela lamanzi, itiye, ikhofi, ubisi noshukela nakho kuhlinzekwa. Kukhona isiqandisi esincane esinefriji, iketela kanye nezitsha zokudlela nezokuphuzela. SICELA UQAPHELE, AYIKHO IINDLELA ZOKUPHEKA.
Indlu ingaphansi kwemizuzu emi-5 uma usuka esikhumulweni sezindiza iMaurice Bishop International, ibhishi elidumile emhlabeni wonke iGrand Anse, ibhishi laseMorne Rouge, iSpice land mall, inxanxathela yezitolo iGrand Anse, ezinye izitolo, amabhange, indawo yokudlela edumile yaseMbrellas ebhishi laseGrand Anse nezinye. izindawo zokudlela ezinhle namabha njenge-West Indies Beer Company/The Brewery and Junction Bar, i-Prickly Bay Marina nezinye izindawo zokudlela e-Lance Aux Epines kanye ne-True Blue.
Idolobha elihle lomlando iSt Georges elinamathuba amahle okubona kanye namathuba okuthenga cishe imizuzu eyi-15-20 ukusuka lapho. Ukusuka lapho, izihambeli zazikwazi ukugibela amabhasi eziya kwezinye izindawo zase-St George kanye namanye amaPherishi esiteshini samabhasi
Ngizotholakala ngokoqobo endlini okokuqala ekuseni, izikhathi eziningi kusihlwa nasebusuku. Izivakashi zizokwazi futhi ukungithinta ngocingo.